रूसी नागरिकता: अवस्था र प्राप्त लागि प्रक्रिया
धेरै विदेशीहरू सोच्न प्राप्त को संभावना रूसी नागरिकता छ । नियमित यो प्रक्रिया शुरू धेरै परिवर्तन उद्देश्य प्रक्रियाहरु । केही मानिसहरू छन् अक्षम प्रयोग गर्न एक सरल प्रक्रिया हासिल नागरिकता, तर तिनीहरूले पूरा गर्नुपर्छ निश्चित आवश्यकताहरु र अवस्था छ । तपाईं हुनुपर्छ कसरी बुझ्न र लागू गर्न कहाँ, के कागजातहरू व्यवस्था र वास्तवमा के आवश्यक नागरिकता छ । हरेक विदेशीले प्राप्त गर्ने नागरिकता को रूसी संघ भर पर्न सक्छौं, विभिन्न क्षमताहरु छ । यी निम्न समावेश: कार्यक्रम अवस्थित भनेर अनुमति प्राप्त गर्न रूसी नागरिकता, न्यूनतम प्रयास, तर विदेशीहरू पर्छ केही खास आवश्यकताहरू पूरा.
बिना सम्भावित कारण यो मानिन्छ छ असम्भव । नागरिकता को रूसी संघ मा बुझे सकिन्छ धेरै तरिका मा निर्भर गर्दछ, उपलब्ध मैदान: को इन्कार रूसी नागरिकता पनि पर्छ ठीक जारी गर्न सकिन्छ, जसको लागि यो आवश्यक छ पेश गर्न विशेष आवेदन गर्न. माफी छ स्वैच्छिक केवल यति, कुनै तरिका जबरजस्ती गर्न असफल जबरजस्ती गर्न एक व्यक्ति त्यागेनन् नागरिकता छ । हरेक नागरिक को अर्को देश बन्ने मौका को एक नागरिक को रूसी संघ. यस पछि हुनुपर्छ सही प्राप्त लागि प्रक्रिया रूसी नागरिकता छ । उहाँले प्रदर्शन गर्न धेरै क्रमिक चरणमा छ । सबै कार्यहरू गर्नु पर्छ बाहिर मा वास्तविक समय. तसर्थ, यो प्रक्रिया एकदम लामो रूपमा, मिति देखि को लागि दाखिल नागरिकता पारित हुनुपर्छ छैन भन्दा कम एक वर्ष । रूसी नागरिकता आवश्यक तयारी को धेरै कागजातहरू र प्रदर्शन धेरै लगातार. प्राप्त को प्रक्रिया नागरिकता को रूसी संघ प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, मानक अनुसार योजना वा अन्तर्गत सरल छ । सरल प्राप्त रूसी नागरिकता मात्र अनुमति अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम छ । यी समावेश को.
यी अवस्थामा, एकदम कम समय को राशि तपाईं खर्च हुनेछ नागरिकता को लागि
मानक अनुसार प्रक्रिया गर्न आवेदक आवश्यकता बाँच्न रूस मा, छैन कम पाँच भन्दा वर्ष पुरानो संग बासिन्दाहरूले को रूसी संघ. रूसी नागरिकता को छोराछोरीलाई छ, पनि यो सिद्धान्त आधारित छन् । यसबाहेक, यो आवश्यकताहरु: कागजातहरू प्राप्त गर्न रूसी नागरिकता आवश्यक छ लागि लागू गर्न छ महिना सम्म अवधि को अन्त को मान्यता को निवास परमिट. जबकि प्रक्रिया गर्न सक्छन्, विशेष वयस्क र सक्षम व्यक्ति । छोराछोरीलाई लागि प्रक्रिया द्वारा प्रदर्शन को आमाबाबुले वा अभिभाबकहरुको. यो प्रक्रिया उपलब्ध छ जो मानिसहरू लागि मात्र फिट को आवश्यकताहरु कार्यक्रम को को वा अन्य कार्यक्रम । तिनीहरूलाई लागि, एकदम सरल प्राप्त रूसी नागरिकता छ । यो प्रक्रिया लिन छैन, धेरै समय र आवश्यकता छैन को तयारी को धेरै कागजात । यो प्रयोग गर्न सरल प्रक्रिया मात्र केही विभाग आवेदकहरुको. यी समावेश विदेशीहरू सन्दर्भमा अवस्था: कि निर्धारण गर्न एक विशेष विदेशीले प्रयोग गर्न त्वरित प्रक्रिया, यो सिफारिस गरिएको छ संग परामर्श गर्न एक अनुभवी वकील. सामान्यतया आप्रवासी देखि सीआईएस लागू गर्न सक्छन् यो योजना छन् रूपमा, रूसी देशी वक्ता । यो स्थिति खटाइएको छ पछि पारित आयोग, साथै परीक्षण भइरहेको लिखित रूप मा. यसबाहेक, चढाएको यस्तो मौका अन्य व्यक्ति निश्चित अवस्थामा छ । सही प्राप्त गर्न रूसी नागरिकता अन्तर्गत सरल प्रक्रिया उपलब्ध छ: सबै को माथि विदेशी व्यक्ति मौका छ लाभ उठाउन देखि एक सरल प्रक्रिया रही रूसी नागरिकता छ । यदि यो असम्भव एक विदेशीले लागि प्रयोग गर्न एक सरल योजना, उहाँले प्रदर्शन हुनेछ लगातार कदम को एक मानक प्रक्रिया छ । प्रत्येक चरण मा यसको आफ्नै सूक्ष्म छ, त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ गर्न राम्ररी बुझ्न नियम को प्रक्रिया । विदेशीहरू गर्दा सीमा पार गर्नुपर्छ छ एक भिसा वा राहदानी । को बासिन्दा देखि देशहरू छन् कि भन्सार संघ सदस्य, आवश्यक एक आन्तरिक पासपोर्ट छ ।, देश मा आप्रवासी पर्छ सूचना दिन को आफ्नो आगमन.
तपाईं एक घर किराए वा रहेको छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति - के हो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार